ARCORA na-ekpuchi sprayer isi maka kichin kpụọ maka njikọ G1 / 2 nwoke - arcorobinet
Welcome / ngwa / Foset ngwa / ARCORA na-ekpuchi sprayer isi maka kichin kpụọ maka njikọ G1 / 2
Nhọrọ raygba - Nke a na-agba, ebe a na-ewepu kichin na-agba agba n'isi na-enye nhọrọ dịgasị iche iche.
Ewebata Smart raygba, ọhụrụ nnọchi H5003 eluigwe na ala esiri-esi ịgba isi e mere na-adị mfe arụnyere n'ime gị ẹdude kichin foset. Ọ na-egosipụta okirikiri nhọrọ ụtọ dị ụtọ ya na ụzọ abụọ gpm 1,5 gpm na-azọpụta mmiri nke mbara igwe, ọnụego jets.
Rịba ama tupu ịzụta: kichin kichin isi a dochie anya bụ maka njikọ g1 / 2 (nwoke) (ihe dị ka 2cm ma ọ bụ 0,8inch), ọ bụghị npt, ọ bụghị eluigwe na ụwa Ogo dị elu: isi ịgba kichin e wuru nke injinịa ọkwa plastic (ABS) na kwa kpọkọtara neoperl aerator, ike ga-eji n'ihi na ezi a ogologo oge kwa ụbọchị were, na leghaara anya nickel imecha bụ nchara na-enweghị mkpịsị aka.
3-Nzube Style: Na-aga n'ihu mmiri na-asọpụta na-enye nro dị nro, dị nro na-enweghị ịgba mmiri; mmiri na-agba agba nwere ike ịsacha mkpụrụ osisi ma ọ bụ akwụkwọ nri na nro dị nro, ịgba na-enweghị mmerụ ahụ; Ọkpụkpụ mmiri mmiri aqua / kpochapụla agụba nwere ike ihicha ngwa ngwa gị ngwa ngwa na ike dị ike.
Ihe dị mfe iji dozie: aerator ABS dị elu nwere ike ịbụ nke nwere ike iji mkpụrụ ego, enweghị mmiri siri ike ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ, wepu ya na mmiri